Bodisma - Wikipedia
Ny bodisma dia fivavahana sady filôzôfia izay nipoitra avy tao India tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K. noho ny fifohazana ara-panahin' iSiddhartha Gautama sy ny fielezan' ny fampianarany. Izany fivavahana sady filôzôfia izany dia mampianatra ny olona hamarana ny fijaliany amin' ny alalan' ny fanesorana ny fankahalana, ny tsi-fahalalana ary ny fitiavam-bola tafahoatra. Rehefa manao zava-dratsy ny olona dia hitarika voka-dratsy ho azy izany. Rehefa manao zavatra tsara ny olona dia hitarika voka-tsoa ho azy izany. Tsy mifandanja ny zavatra tsara sy ny zava-dratsy. Ny fampianaran' ny bodisma mikasika ny andriamanitra sy ny fomban' andriamanitra dia tsy itoviany amin' ny an' ny fivavahana hafa: azo heverina ho fivavahana tsy manana andriamanitra mpamorona ny bodisma; satria tsy misy firesahana momba izany ao amin' ny ankamaroan' ny sampan' ny bodisma. Ny fitsaohana sy ny fanompoam-pivavahana amin' i Bodà, amin' ny maha bhagavat azy, dia mandray anjara lehibe ao amin' ny sampana teravada sy ao amin' ny sampana mahaiana, izay manao an' i Bodà ho Bodhi ("voafoha") manana ny vatam-pisehoana telo sosona atao hoe trikāya.
Fitambarana fanao misandrahaka ny bodisma ka hita ao ny fandinihan-tena, ny vavaka, ny fanatitra, ny fitandremana ara-pitondrantena, ny hevitra ara-psikôlôjia sy ara-pilôzôfia; ny fampianarana momba ny fahaterahan' izao rehetra izao (kôsmôgônia) sy ny fiheverana momba izany, ka ny fomba fijerin' ny "voafoha" (bodhi) no entina manakatra izany rehetra izany. Toy ny jainisma ihany koa ny bodisma izay avy amin' ny fomba sramana (shramana) fa tsy avy amin' ny brahmanisma (toy ny hindoisma).
Tamin' ny taona 2018 dia niisa 623 tapitrisa ny Bodista maneran-tany, izay mametraka io fivavahana io amin' ny laharana fahefatra aorian' ny kristianisma sy ny finoana silamo ary ny hindoisma. Nisy fihemorana ny isan' ny mpanaraka azy tamin' ny taonjato faha-20 noho ny fanenjehan' ny fitondram-panjakana kômonista azy tao Sina sy tao Indôsina.
Roa ny sampana na firehana lehibe ao amin' ny bodisma, dia ny teravada (theravāda) sy ny mahaiana (mahāyāna). Miely any Srilanka sy any Azia Atsimo-Atsinanana (Kambôdia, Laôsy, Mianmara ary Tailandy) ny teravada. Ny mahaiana kosa dia hita indrindra any Nepaly, Malezia, Botàna, Sina, Japàna, Kôrea, Vietnamy, ary Taioàna. Ny vajraiana dia fampianarana avy amin' ireo Bodista indiana izay azo heverina ho sampana na endriky ny bidisma mahaiana. Ny bodisma tibetana kosa indray dia endriky ny vajraiana izay nitahiry ny fampianarana vajraiana nandritra ny taonjato valo tany India, izay arahin' ny vahoaka maro ao amin' ireo firenena amin' ny faritra himalaiana Môngôlia sy Kalmykia.
1 Ny sampan' ny bodisma
1.1 Ny bodisma hinaiana
1.2 Ny bodisma mahaiana
1.3 Ny bodisma vajraiana
Ny sampan' ny bodisma[hanova | hanova ny fango]
Ny sampan' ny bodisma dia atao hoe sekolin' ny bodisma ihany koa, izay zana-pizaràn' ny foto-pampianaran' i Boda, izay niseho taorian' ny nahafatesany, vokatry ny adihevitra momba ny zavatra sasany momba ny fitsipi-pifehezana ao amin' ny fiainan' ny moanina (na monka) na momba ny fampianarana. Maro dia maro ireo sekoly ireo nefa azo avondrona ao amin' ny firehana telo lehibe (atao hoe yāna), dia ny hinaiana (hīnayāna), anisan' io ny teravada (theravāda) sy ny mahaiana (mahāyāna) ary ny vajraiana (vajrayāna).
Ny bodisma hinaiana[hanova | hanova ny fango]
Ny bodisma tranainy, izay atao hoe bodisma hinaiana dia ivondronan' ny sekoly maro. Miisa valo ambin' ny folo ireo sekoly taloha ireo nefa ny iray ihany no sisa ankehitriny, dia ny bodisma teravada.
Ny bodisma teravada dia endriky ny bodisma izay manjaka ao Azia Atsimo sy Azia Atsimo-Atsinanana (Srilanka, Tailandy, Kambôdia, Birmania, Laôsy, faritra sasany ao Vietnamy), ny Sinoa ao Indônezia sy ao Malezia ary ny foko ao amin' ny tapany atsimo-andrefan' i Sina. Vao tsy ela akory ny niorenany tany Andrefana raha mitaha amin' ny firehana zen na vajraiana.
Ny bodisma mahaiana[hanova | hanova ny fango]
Ny bodisma mahaiana dia niseho tamin' ny fiandohan' ny andro kristiana tao amin' ny Empira Kosana sy tao avaratr' i India izay nielezany haingana tany Trim sy tany Sina, alohan' ny hielezany tamin' ny faritra hafa any amin' ny Atsinanana Indrindra. Anisan' ny sekolin' ny mahaiana ny Madhyamaka, ny Chittamatra, ny Chán (Son any Kôrea, Zen any Japàna), ny Jìngtǔ ("Tany madio"), ary ny bodisman' i Nichiren.
Ny bodisma vajraiana[hanova | hanova ny fango]
Ny bodisma vajraiana, izay atao hoe bodisma tantrika dia endriky ny bodisma izay azo fantarina amin' ny alalan' ny tsindrimandry na amin' ny alalan' ny fifehezana ny mahaiana sy ny hinaiana. Ahitana singa avy amin' ny hindoisma ary indrindraindrindra ny sivaisma kasemiriana izy. Ao amin' ny faritra himalaiana (Tibeta, Nepaly, Sikkim, Botàna, any amin' ny sisiny andrefana sy avaratr' i Sina, ao avaratr' i India) ary koa ao Japàna nanomboka tamin' ny taonjato faha-7 tamin' ny alalan' ny sekolin' i Shugendo, ny an' i Shingon ary ny an' i Tendai. Hita ao Môngôlia sy any amin' ny faritra sasany ao amin' ny Federasionan' i Rosia, ary koa any Japàna io fivavahana io.
Ny bodisma tibetana dia endriky ny bodisma vajraiana izay nandroso tao Tibeta. Misy sekoly efatra ankehitriny ny bodisma tibetana, dia ny Nyingmapa, ny Kagyüpa, ny Sakyapa ary ny Gelugpa. Ity farany ity no fantatra indrindra any amin' ny tontolo tandrefana, satria ny Dalai-lama dia mpikambana fantatra ao aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodisma&oldid=1039011"
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 07:53 ity pejy ity.